सेनाले दियो सबैभन्दा धेरै जागिर, लोक सेवाका केही विज्ञापनमा आवेदन नै परेन !
लोक सेवा आयोगले गत आर्थिक वर्षमा आह्वान गरेकामध्ये केही विज्ञापनमा कुनै पनि दरखास्त परेन । लोक सेवा आयोगले हालै सार्वजनिक गरेको वार्षिक प्रतिवेदनमा उक्त कुरा उल्लेख छ ।
आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा प्रकाशित निजामती सेवातर्फका १ सय ७४ र स्थानीय तहका ४२२ गरी कुल ५९६ विज्ञापनमध्ये आ.प्र.तर्फ नेपाल प्रशासन सेवाको टाइपिष्ट पदको ११ वटा विज्ञापन र न्याय, कानून समूहको उपसचिव (दलित समूह) पदमा कुनैपनि दरखास्त परेनन् ।
लोक सेवा आयोगले आर्थिक वर्ष ०७४/०७५ मा आह्वान गरेको ८ वटा शीर्षकको विज्ञापनमा १ जना पनि उम्मेदवारले लिखित परीक्षामा सहभागी नभएको आयोगको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।
उक्त आर्थिक वर्षमा दलित कोटाको लागि छुट्याइएको राजपत्रांकित तृतीय श्रेणीअन्र्तगत इञ्जिनीयरिङ जियोलोजिस्ट १ जना, राजपत्रांकित द्वितीय श्रेणीको सिनियर गेम स्काउट १ जना, पाँचौ तहको स्वास्थ्य शिक्षा टेक्निसियन १ जना, पाँचौ तहको स्वास्थ्य शिक्षा टेक्निसियन महिलातर्फ १ जनाको विज्ञापनमा एक जनाले पनि लिखित परीक्षामा सहभागिता जनाएनन् । राजपत्रांकित द्वितीय श्रेणीको सहायक कम्प्युटरमा २ जना र मेकानिकल इञ्जिनीयर अपरेटरको लिखित परीक्षामा कसैले पनि सहभागिता नजनाएको आयोगको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।
निजामती सेवामा आकर्षण, १ पदका लागि ३ सय २९ आवेदन
नेपालीहरुमा निजामती सेवामा प्रवेश गर्न चाहनेहरुको संख्या अत्याधिक धेरै रहेको छ ।
गत आर्थिक वर्षमा निजामती सेवाको लागि लोक सेवा आयोगले खुलाएको विज्ञापनमा १ पदका लागि ३ सय २९ जनासम्मले आवेदन दिएको देखिन्छ । गत आर्थिक वर्षमा लोक सेवा आयोगले १ सय ९३ जना नायब सुब्बाका लागि गरेको विज्ञापनमा ६३ हजार ४ सय ५६ जनाले आवेदन गरेका थिए भने २५२ जना खरिदार पदका लागि गरेको व्ज्ञिापनमा ६४ हजार ७ सय ३३ जनाले आवेदन गरेका थिए ।
सबैभन्दा धेरै आवेदन ब्राह्मण जातिबाट
लोक सेवा आयोगको विज्ञापनमा सबैभन्दा धेरै ब्राह्मण जातिको तर्फबाट आवेदन गर्ने गरेको तथ्यांकमा उल्लेख गरिएको छ ।
आर्थिक वर्ष ०७५/०७६ मा लोक सेवा आयोगले नेपाल सरकारका विभिन्न अंगमा कर्मचारीको पदपूर्तिका लागि गरेको विज्ञापनमा जम्मा १ लाख ४३ हजार ८ सय ४० जनाले आवेदन दिएका थिए, जसमा ३९ हजार ८ सय ६० जना अर्थात् २७.७१ प्रतिशत ब्राह्मणले आवेदन गरे । जातिगत रूपमा सबैभन्दा धेरै ब्राह्मण समुदायका प्रतिनिधिले आयोगको विज्ञापनमा आवेदन गरेको देखिन्छ ।
आयोगको विज्ञापनमा सबैभन्दा थोरै सहभागिता बोटे, चिडिमार, कछडिया र पञ्जावी/शिखले जनाएको देखिन्छ । अघिल्लो आवमा आयोगले खुलाएको विज्ञापनमा ती जातिबाट जम्मा ४ जनाले उम्मेदवारी दिएको आयोगका प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।
सबैभन्दा धेरै जागिर नेपाली सेनाले दियो
अघिल्लो आर्थिक वर्ष ०७५/०७६ मा नेपाली सेनाले सबैभन्दा धेरै रोजगारी प्रदान गरेको छ । प्राविधिकतर्फ ६ सय ३२ र अप्राविधिक तर्फ ११ हजार ८ सय ७ जना गरी जम्मा १२ हजार ४ ३९ जनालाई नेपाली सेनामा प्रवेशका लागि आवेदन मागेको लोक सेवा आयोगको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।
नेपाल प्रहरीले ९ हजार १३ जना र सशस्त्र प्रहरीले २ हजार ४ सय ६३ जनालाई सेवा प्रवेशका लागि आवेदन खुलाएको थियो ।
नेपाल सरकारको लगानी रहेको बैंकहरूमध्ये राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले १ हजार १ सय ४२ जनालाई रोजगारीको अवसर दिएको आयोगको तथ्यांकमा उल्लेख गरिएको छ ।
जागिरमा पुरुषसँगै महिलाको उपस्थिति
स्थानीय तहका लागि लोक सेवा आयोगले गत आर्थिक वर्षदेखि पछिल्लो विज्ञापनसम्म कुल ९ हजार १ सय ६१ पदका लागि दरखास्त आह्वान गरेको थियो ।
उक्त विज्ञापनमा ५ लाख २८ हजार ९ सय ६८ दरखास्त प्राप्त भए । जसमा महिला उम्मेदवार २ लाख ८४ हजार ९ सय ७३ र पुरुष उम्मेदवार २ लाख ४३ हजार ५ सय ८५ को संख्यामा रहेका थिए । स्थानीय तहमा भएको कर्मचारी मागमा पुरुषको तुलनामा महिलाको आवेदन झण्डै ४१ हजारले बढी भएको आयोगको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।
आयोगले आर्थिक वर्ष ०७५/०७६ मा सुरक्षा निकायसहित ३४ वटा संस्थामा लिएको लिखित परीक्षामा ४१ हजार ३ सय ६४ जना आवेदक उत्तीर्ण भएका थिए । आवेदकमध्येका जम्मा ११ हजार २ सय २० जना महिला उत्तीर्ण भएको आयोगको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।
आ.व. २०७५/७६ को अवधिमा सुरक्षा निकायसहित २८ वटा संगठित संस्थाहरूको लागि भएको विज्ञापनमा कुल ३ लाख ३८ हजार ३ सय ९१ दरखास्त परेका थिए । उक्त परीक्षामा पुरुष उम्मेदवार १ लाख २४ हजार ३ सय ७८ जना थिए भने महिला उम्मेदवार ७४ हजार ३ सय ४ जना गरी कुल १ लाख ९८ हजार ६ सय ८२ जना सम्मिलित भएका थिए ।
गोविन्द केसीको अनसन 'सुहाउँदो' नभएको सरकारको टिप्...